आफ्नै साथीलेे साथीको ह'त्या गरेपछि... (भिडियोसहित) - Filmy News Portal Of Nepal
आफ्नै साथीले साथीको ह’त्या गरे भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तपाईं आफ्नो मिल्ने साथीलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुहुन्छ ? विश्वास गर्नुहुन्छ भने कुनै दिन गहिरिएर सोच्नुपर्ने परिस्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न । कहिलेकाही तपाईंको विश्वासिलो नजिकको साथीले तपाईंको ज्या’न पनि लिन सक्छ । यस्तै विषयमा बनेको लघुचलचित्र “ट्र’ष्ट” अर्थात् (विश्वास) सार्वजनिक भएको छ । लघुचलचित्रमा एकदमै मिल्ने दुई साथीहरूमाथिको विश्वास कसरी तोडिन्छ भन्ने कुरा उतार्न खोजिएको छ ।
कथा एउटा क्याफेबाट शुरु हुन्छ । दुवै जना चिया पिउँछन्, बाँडेर खाजा खान्छन् । बिल तिर्ने बेलामा दुवैले तिर्न खोज्छन् । एकजनाले बिल तिरेपछि दुवै कोठामा आउँछन् अनि शुरु हुन्छ विश्वासमाथिको प्रश्न । बिल तिर्ने बेलामा साथीको पर्समा भएको आफ्नो प्रेमिकाको फोटोले कथालाई नयाँ मोड थपिदिन्छ ।
कथाको मुख्य पात्र अर्थात घट’नाको मुख्य कार’ण प्रेमिका भएतापनि उनको भुमिकालाई तस्बिरमार्फत देखाउन खोजिएको छ । धेरै केटीहरु खेलाईराख्ने साथीले आफ्नै प्रेमिकालाई पनि नछोडेपछि विश्वास र सम्बन्ध टु’ट्ने मात्र हैन ज्या’न लिन पनि पछि ह’ट्दैन भन्ने कुरालाई देखाईएको छ । एउटा बन्द कोठाभित्र दुई साथीबिचको द्व’न्द्वा’त्मक दृश्यले धेरैको मन सि’रिङ्ग बनाईदिन्छ, जसकारण पोष्टरमा १६ वर्षमाथिकालाई मात्र हेर्न प्रेरित गरिएको छ । घट’नाको रहस्य अन्तीममा मात्र खुल्दै जान्छ, जसकारण कथावस्तु सरल रुपमा सजिलै बुझ्न कठिन हुन्छ ।
कुनै संवाद प्रयोग नगरिएको यस लघुचलचित्रमा समाजमा हुन सक्ने घट’नाको प्रतिनिधित्व गरेर घनिष्ठ साथीको विश्वासमाथि प्रश्न उठाईएको छ । दुई आत्मिय साथीको विश्वास कसरी टु’ट्छ भन्ने विषयलाई उठान गरिएको छ । करिब १३ मिनेट लामो लघुचलचित्र हेरिरहँदा आफ्नै साथीको विश्वासलाई एकपटक सोच्न बा’ध्य बनाउँछ । निर्माण पक्ष केही कम’जोर देखिएतापनि चलचित्र हेरिरहँदा दर्शकलाई कौतुहलता जगाइरहन्छ । समग्र रुपमा यसबाट दर्शकलाई सन्देश दिने भन्दा पनि सचेत तुल्याउन प्रेरित गरेको भेटिन्छ ।
सञ्चारकर्मी तथा रंगकर्मी मोहन अभिलाषीको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको चलचित्रको छायांकन रामकृष्ण चौँलागाइँले गरेका हुन् । क्याफे, कोठा र पार्कमा छायांकन गरिएको यस लघुचलचित्रमा मोहन अभिलाषी, मोहन श्रेष्ठ, मुकेश हमाल, प्रेम श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
बरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना !
पितृ शो’क परेर भाव्वि’हल अधिकारीलाई नीताले यसरी स’म्हा’लिन, छोडिन्न एक छिन पनि उनको हात, हेर्नुहोस देखियो यस्तो का’रुणि’क दृ’श्य (भिडियो सहति)